ကြေးမုံငွေမက် မြန်တျန့်ခက် greed | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ကြေးမုံငွေမက် မြန်တျန့်ခက် greed
ကြေးမုံငွေမက် မြန်တျန့်ခက် greed
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Nov 29, 2013 in Aha! Jokes, Satire | 8 comments
ကြေးမုံဂျီး.. မင်း.. ပိုက်ဆံ အချောင် မလိုဂျင်ဗူးလား..။ အိုး.. လူဗဲတော့ မလိုဂျင်ဒဲ့သူ ရှိမလား.. ရှိရင် ပြဇမ်းပါ.. ပါတီကေဒါစာရင်း သွင်းဂျင်လို့..။ ဂွီစ်… အရေးဒဲ့ နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်လိုသူနဲ့ လာတွေ့နေဒယ်။ ပိုက်ပိုက် မရဒဲ့ နိုင်ငံရေး ခဏထားလိုက်ပါဦး.. ခုဟာက အလဂါး နေရင်းထိုင်ရင်း သပိတ်ဝင်အိတ်ဝင် ရမှာ။ နာမည်လေး တလုံးရင်း လိုက်ယုန်ဘဲ။ ရတဲ့အမြတ် အရင်းနှုတ်ပီး တယောက်တဝက်ကွာ.. ဘယ့်နှယ်လဲ။ စိမ်ဝံ့သလားပေါ.. အံမာ.. စိမ်ခေါ်ရင် တိမ်ပေါ်ထိ လိုက်ဝံ့ဒဲ့ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ကေဒါရဲမေ အီတွန့်ဗွမ်ပါရှင့်။ ပြီးခဲ့တဲ့လ ပါတီက အသုံးစရိတ် ပို့မပေးလို့ ဘိုင်ပြတ်နေဒါနဲ့ အတော်ဗဲ။ ပါတီနဲ့ အစိုးရအပေါ် သစ္စာဖောက်တာမျိုးတော့ မလုပ်နိုင်ဗူးနော်..။ မြန်တျန့်ပြည်ဂျီး ဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်ပစေ.. ငါနဲ့ မဆိုင်ဗူး။ အဲ.. ဝဒေသက လွဲရင်ပေါ့.. သူ့ဒေါ့ သွားအထိနဲ့ အဲဒါ ဝတို့ အမျိုးဒွေ…။ အေးဗာ ကြေးမုံဂျီးရာ.. အခုဟာဂ နိုင်ငံရေး စစ်ရေး အပါဗာပူး၊ စီးပွားရေး စပ်တူအစုစပ် သန့်သန့်ဂလေး..။
ဟောသည်မှာ လက်မှတ်ထိုး.. ပီးရင် လက်ဗွေနှိပ်။ အရင်းဂ တယောက်ငါးသိန်း၊ တနှစ်ပြည့်ရင် ခြောက်သောင်းစီ မြတ်မယ်။ အရင်းလည်း မဆုံးဗူး.. အမြတ်လည်း သေချာဒယ်.. ဟန်မကျလား။ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီမှပေးသော မြစ်ဆုံရေကာတာ စီမံကိန်း ဝါဒဖြန့်ချီခဖြင့် ဝယ်ထားသည့် ဆွဲကြိုးလေးဖျောပီး ကကြောင်ကြီးနှင့် စပ်တူစီးပွား လုပ်ပစ်လိုက်သည်။ အဖော်ကောင်းရင် ထိုင်ဝမ်အထိသွား မော်စီတုံးပုံ ချိတ်ရဲဒယ်.. ဘာမှတ်သတုံး တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးဒဲ့ဟေ့..။ ဟုတ်ပါပြီ ကြေးမုံဂျီး.. ယုန်ပါတယ် ဒရယ်ပါဒယ် ရှဉ့်ပါဒယ်။
အဖြစ်ကဒေါ့ အဲသာဗဲဗျာ၊ လူငယ်တို့ဘာဝ မစဉ်းစား ဇွတ်လုပ်ထားဒါ.. လူဂျီးဒွေ အသိလိုက်ရဖူး..။ အဲဒီလိုနဲ့ နေလာရင်း ကြေးမုံဂျီး ယောက်ျားယူမယ်လဲဆိုရော ကကြောင်ဂ သူသာလျင် ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း စာချုပ်ကိုင်ပီး ပြသနာ လျှာပါရော..။ သမဝါယမဘဏ် မင်ဂါဦးအပ်ငွေစာချုပ်ဗျ.. တနှစ်၁၀%အတိုးအပြင် လက်ဖွဲ့နှစ်သောင်း အပိုဆောင်းပေးတယ်။ ဆယ်သိန်း အနည်းဆုံး တနှစ်အပ်ရမယ်.. စုစုပေါင်း တသိန်းနှစ်သောင်း ရတယ်၊ သူများ ဂတုံးပေါ် ထိပ်ကွက်လာတဲ့ ကြေးမုံဂျီး ဒီတချီ ခံလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။ အကြင်လင်မယားဖြစ်ကြောင်း လက်ထပ် စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးထားဒေါ့ ဥပဒေဂျောင်းအရ ငြင်းမလွတ် ဖြစ်နေပြီ။ ကြောင်ကြီးကိုလည်း ဘယ်လိုမှ ဖြောင်းဖျလို့ မရဘူး။ ကြေးမုံဂျီးမှ ကြေးမုံဂျီး ဖြစ်နေဒယ်.. သူ့မယူရင် ရဲခေါ် ဖမ်းခိုင်းမယ်ဒဲ့။ ကြေးမုံဂျီးကလဲ အဲလိုမတရား လုပ်လို့ဂဒါ့ တရုတ်ကူမြူနစ်ပါတီ ကွန်ဂရက်မှာ ဖွင့်ချပီး မြန်တျန့်ပြည်ဂို စစ်ကြေငြာခိုင်းမဒဲ့လေ။ အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခေါင်းမီးတောက် ကုန်ဂျဒေါ့မှာဗဲဗျာ။ ကြေးမုံဂျီးနဲ့ယူမည့် အမျိုးသားက ဝလွတ်မြောက်ရေး တပ်မဒေါ် မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေးဌာနဂျီးမှူး ယာဘအုပေါင်ဆိုဒေါ့ ပိုဆိုးသွားတာပေါ့။ ဝဒို့ နိုင်ငံတဂါနဲ့ စာချုပ်အမျိုးမျိုးချုပ်ပီး ဗျောင် ဘိန်းရောင်းစားတာ တသက်ရှိပီ.. ဘာမှ အဖြစ်ဖူး။ ပြည်ဒွင်းစစ် ပြန်ဖြစ်ချင်လား.. ဘာညာနဲ့ သေနတ်ကြိမ်း ကြိမ်းနေဒယ်။ ကကြောင်ကလည်း အလျှော့ပေးဗူး.. သမဒဂျီးဆီ စာတင်မယ်၊ မရရင် ပြည်တွင်းပြည်ပ အင်အားစုတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ဆန္ဒပြမယ်ဆိုလား.. စစ်တပ်ကိုပါ စည်းရုံးမယ် လုပ်နေဒယ်။
ဒါနဲ့ဗဲ မြန်တျန့်ပြည်ဂျီး စစ်တပ်လက်အောက် တခါပြန် ကျဦးဒေါ့မည် တူရဲ့ဗျာ… ကယ်ဂျဗာဦး…။
ပြည်တွင်း ဘဏ်များတွင် ထားရှိမှု နည်းပါသော အပ်ငွေစနစ် တစ်မျိုးဖြစ်သည့် မင်္ဂလာဦးအပ်ငွေ ထားရှိသောသူများကို လက်ဆောင်အဖြစ် ကျပ်နှစ်သောင်းပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သမဝါယမဘဏ် လီမိတက်ထံမှ သိရသည်။ မင်္ဂလာဦးအပ်ငွေ ထားရှိမည် ဆိုပါက လက်ထပ်စာချုပ် မိတ္တူ ဘဏ်တွင် ထားရှိရမည် ဖြစ်ပြီး ကျပ် ၁၀ သိန်းနှင့် အထက်ကို လက်ထပ်အပြီး ခြောက်လအတွင်း အပ်နှံရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘဏ်တိုးနှုန်း တစ်နှစ်လျှင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး တစ်နှစ်အပ်နှံရမည် ဖြစ်ကြောင်း သမဝါယမ ဘဏ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ — http://www.thithtoolwin.com/2013/11/blog-post_1522.html
ထိုင်ဝမ်မှာ မော်စီတုံးပုံ ချိတ်ရမရတော့မသိဘူး…
ဟောင်ကောင်မှာ ချိတ်ရင်တော့ ရှော့ကြီးကြီးရှိတယ်…
အပျက်ပျက်နဲ့ နှာခေါင်းမီးတောက် ကုန်ကြတဲ့အဖြစ်ပေါ့လေ
သမဝါယမဘဏ်တွင် မင်္ဂလာဦးအပ်ငွေ ထားသူများ ကျပ်နှစ်သောင်း လက်ဖွဲ့မည် ….အံ့ဖွယ်ပါတကား
အူးကျောက်စ်တို့တော့ ပိုင်ပီနော်…နောက်က ၆ညက်နှာတို့လည်းလိုက်လာလိမ့်မယ်
ကြေးမုံ ကြီး ရေ ကြောက် နဲ့ ဦး ကြောင် ကို ဒီ လို လုပ် လိုက် ပြီ
ကြောင်ကြီး ပေါင်တွင်း ကတ်ကြီး သွင်း ၍
သန်း ဥ ခန့် မျ သေး ညောင့် ညောင့် ကို
အား နင့် ညက် ဖြတ် ပြတ် ဒွတ် လေ လျင်
သဲ ခိုက် တ မြ နာ ကျင် လျှ ၍
ဝမ်းနည်း ပတ်လက် အော် ကာ ရှာ သည်
စ ဒါ နော် စိတ် ဆိုး နဲ့
နှစ်နိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ့် အကြို နမိတ်ထင်တယ်။
ကြောင်ကြီးနဲ့ ကြေးမုံကြီး အကျိုးတူစီးပွားဖက်တွေ ဖြစ်နေလို့။
သမ၀ါယမဘဏ်က ညာဏ်နီညာဏ်နက်ထုပ်တာလေ။ သူများဘဏ်တွေက တနှစ်ကို အတိုးလေးကြိမ်ပေးတယ်။ အတိုးပေါ်အတိုးဆင့်တော့များများအပ်တဲ့သူတွေကကိုက်တယ်။ သမ၀ါယမဘဏ်ကတနှစ်ကို အတိုးနှစ်ကြိမ်ပဲပေးတယ်။ များများအပ်တဲ့သူတွေက အတိုးနှစ်ခါစာနာတယ်။ အဲတော့အပ်ထားတဲ့ငွေတွေပြန်ထုပ်ပြီးတခြားဘဏ်တွေမှာပြန်အပ်ကြတယ်။ အဲဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်။ ငွေပြန် အပ်အောင်ဆွဲဆောင်နေတာ။